जाने होइन त राम्चेको आलडाडा घुम्न ? – धौलागिरी खबर
जाने होइन त राम्चेको आलडाडा घुम्न ?
धौलागिरी खबर	 २०७८ माघ ११, मंगलवार १५:३४ गते मा प्रकाशित 476 0
अन्नपूर्ण गाउँपालिका ८ राम्चेको आलडाडा । तस्बिर सुरेन गुरुङ
आलडाडा (राम्चे) । वरपर गुराँसको जंगल । डाडाको सम्मो फाँट । एकान्त वातावरण । पृष्ठ भूमिमा लहरै देखिने हिमशृङखला । तरतिरका ग्रामिण बस्ती । बिहान सुर्योदय र साँझमा सुर्यास्तको मनमोहक दृष्य अवलोकन गर्न सकिने ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ मा रहेको आलडाडा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपुर्ण र मनोरम छ । समुन्द्रि सतहदेखि दुई हजार ६२० मिटर उचाइमा रहेको आलडाडा पर्यटकको पर्खाइमा छ ।
स्थानीय अगुवा भक्तबहादुर पुर्जा आलडाडाको सौन्दर्यका बारेमा प्रचारप्रसारको कमीले ओझेलमा परेको बताउनुभयो । “प्रचारप्रसारको कमीले पर्यटक आउन सकेका छैनन् । सुनसान छ,” पुर्जाले भन्नुभयो “अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको धेरै पर्यटकीय स्थल जाने बिच बाटोमा पर्ने आलडाडाको प्रर्वद्धन आवश्यक छ ।”
आलडाडामा हिमालयन भ्यू एण्ड गेष्ट हाउ समेत सञ्चालन गरेका पुर्जाका अनुसार हाल बार्षिक दुई सय जनाको हाराहारीमा पाहुना आउने गरेका छन् । आलडाडाको पृष्ठभूमिमा सिस्ने, गुर्जा, धवलागिरी, मानापाथी, निलगिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र मनास्लु हिमालको दृष्य अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
हिमाल र पृष्ठभूमिमा देखिने सुर्योदय र सुर्यास्तको मनमोहन दृष्यले मोहित बनाएको पाहुनाहरुले बताएका छन् । गुराँसको जंगलका साथै बिभिन्न प्रजातिका बनस्पति, जडिबुटी, बन्यजन्तु र पंक्षीहरुको पनि अवलोकन गर्न पाइन्छ ।
करबाकेली इको र अन्नपूर्ण धौलागिरी सामुदायिक पर्यावरणीय पदमार्गमा पर्ने आलडाडा करबाकेही, राम्चे, नागी, मोहरेडाडा, कालीदह, फुलबारी, पुनहिल, घोडेपानी, प्यारीबाराही र टिकोटको मध्य भागमा पर्छ । एक देखि अर्को ठाउँमा जाने पर्यटकहरुका लागि आलडाडा केन्द्र मानिन्छ । म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका पहाडका साथै बस्तीहरुको अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
राम्चे देखि तीस मिनेट, करबाकेही, फुलबारी र मोहरेडाडादेखि एक घण्टा, पुनहिलदेखि दुई घण्टा पैदल हिडेपछि आलडाडा पुग्न सकिन्छ । राम्चे हुदै आलडाडा जोड्ने सडक पनि छ । बस्तीदेखि टाढा रहेको आलडाडामा पुग्ने पर्यटकको सुबिधाका लागि राम्चेका भक्तबहादुर पुर्जाले होटल सञ्चालन गर्नुभएको छ ।
होटलको छानोमा राखिएको जस्तापाटा बाहेक अन्य सबै संरचना काठका हुन् । दुई तले भवनमा बीस जना बास बस्न सक्ने दश वटा कोठा छन् । रु. पैतिस लाखको लागतमा पुर्जाले स्थापना गरेको होटलका कोठाबाटै हिमाल, सुर्योदय, सुर्यास्त र जंगलको अवलोकन गर्न सकिन्छ । प्रति रात बास बस्न एक जनालाई करिब रु. एक हजार बजेट आवश्यक पर्छ ।
बाँझिएर खेर गएको पाखोबारीमा होटल बनाउन रु. ३७ लाख लगानी गरेका पुर्जा कोभिड पछि पर्यटक आउने आशामा हुनुहुन्छ । दश बर्ष साउदीमा रोजगारी गरेर फर्केका पुर्जाले यसअघि राम्चेमा होमस्टे (घरबास) सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
स्थानीय जातका कुखुरा, खरायोको मासु, कोदो, फारको रोटी, ढिडो, च्याउको तरकारी, आलुका परिकार होटलका पाहुनाले चाख्न पाउँछन् । परिवारका सदस्यहरुले मात्र चलाएको होटलमा पाहुना बढेमा दुई जनालाई रोजगारी दिन सकिने पुर्जाले बताउनुभयो ।